နိုင်ငံတော် သီချင်း: National Anthem of the Republic of Uzbekistan
ဥဇဗက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်း၌ မြေဩဇာ ထက်သန်သော ဖါးဂါးနားချိုင့်ဝှမ်း တည်ရှိသည်။ ထိုဒေသတွင် ဆားဒါယာမြစ်မှ ရေသွင်း၍ ဝါ၊ သစ်သီးနှင့် ဆန်စပါးတို့ကို အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးသည်။ ဥဇဗက်ကစ္စတန်နိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ဝါအများဆုံးထွက်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ထွက် ဝါ ၆ဝ% ကို ဥဇဗက် ကစ္စတန်နိုင်ငံမှရရှိသည်။ လူဆန်ပဲပင်၊ ဆန်စပါး၊ စပျစ်သီးနှင့် ဗင်္ဂလား ဆီးသီးတို့ကိုလည်း စိုက်ပျိုးသည်။
တက်ရှကင့်မြို့သည် ဥဇဗက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်၍ အာရှတိုက်အလယ်ပိုင်းရှိ ဆိုဗီယက်ပြည် ထောင်စုမြို့တွင်လည်း အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၁၃၈၅ဝဝဝ (၁၉၇ဝ)ရှိသည်။ အခြားထင်ရှားသော မြို့များမှာ ဗူခါးရားမြို့၊ ခီဗာမြို့၊ ခိုကန်း မြို့နှင့် ဆမာကန်းမြို့များ ဖြစ်သည်။ ဆမာကန်းမြို့သည် ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်အထိ ဥဇဗက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၏မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။တစ်ဆဲ့ကိုးရာစုနှစ်တွင် ရုရှားတို့ ဝင်ရောက်မလာမီက ဥဇဗက် လူမျိုးတို့သည် အာရှတိုက်အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ ကြီးစိုးခဲ့သည်။ ဥဇဗက်လူမျိုးသည် တူရကီတို့၏ အဆက်အနွယ်ဖြစ်၍ အစ္စလာမ်အယူဝါဒီများ ဖြစ်သည်။ ဥဇဗက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၁၁၉၆ဝဝဝဝ (၁၉၇ဝ) ရှိသည်။ 
Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). United Nations. Retrieved on March 12, 2009.
Uzbekistan။ International Monetary Fund။ April 21, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Human Development Report 2010။ United Nations (2010)။ November 5, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။